Saadaasha Paul Merson Ee Premier League Kulamada 13aad Chelsea Vs Manchester United, Red Devils Oo Uu Ka Naxsaday Mar Kale
HomeWararka CiyaarahaSaadaasha Paul Merson ee Premier League Kulamada 13aad Chelsea Vs Manchester United, Red Devils oo uu ka naxsaday Mar kale
November 26, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
Paul Merson ayaa saadaaliyay kulamada isbuucaan ee Premier League, sida kulanka Manchester United ee Chelsea , kulanka Arsenal iyo Newcastle United iyo kulanka Liverpool ee Southampton.
United ayaa kulanka ku soo galaysa Stamford Bridge iyaga oo kaliya hal guul gaadhay 7-dii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka premier League taas oo keentay in ay ku jiraan kaalinta 8-aad ee kala saraynta horyaalka.
Tababaraha ku meel gaadhka ah ee Michael Carrick ayaa u muuqda mid qaban doona kulankiisii ​​ugu horeeyay ee Premier League ka dib markii uu United ku hogaamiyay guul muhiim ah oo ay 2-0 kaga badiyeen Villarreal Talaadadii tartanka Champions League.
Dhanka kale kooxda chelsea ayaa xilli ciyaareedkan ku bilaabatay qaab ciyaareed fiican iyaga oo kaliya hal kulan oo horyaalka ah laga badiyay 12-kii kulan ee ugu dambeeyay iyaga oo hogaanka u haya horyaalka halka ay 3 dhibcood ka sareeyaan kooxda Man City oo ku jirta kaalinta 2-aad.
Dhanka kale, Arsenal ayaa Emirates ku soo dhawaynaysa kooxda dhibtoonaysa ee Newcastle, iyadoo kooxda Eddie Howe ay tahay kooxda kaliya ee aan wax guul ah diiwaan galin 12kii kulan ee furitaanka.
Liverpool oo ku jirta kaalinta saddexaad ayaa madadaalisay Southampton, Reds ayaana doonaysa inay sii wadato qaab ciyaareedkii ay soo bandhigtay kulankii ay 4-0 kaga badiyeen Arsenal isbuucii hore.
Merson wuxuu aaminsan yahay in Chelsea ay awood badan u yeelan doonto United, isagoo sidoo kale saadaaliyay dhammaan kulamada kale ee Premier League ee isbuucaan